Ahoana ny fomba fanaovana gazety: dingana arahina sy fitaovana famolavolana | Famoronana an-tserasera
Ny famoronana gazety dia mety ho toa asa mora raha manana fahalalana ampy hamolavola azy ianao. Tsy adidin’ny ora iray anefa izany, fa asa izay mety haharitra volana maromaro.
Amin'ity lahatsoratra ity, tianay ho saika tsinontsinona izany fotoana izany, ary izany no nanomananay torolàlana kely ho anao miaraka amin'ireo ampahany na teboka sasany izay tsy maintsy raisina, rehefa mamolavola gazety avy amin'ny scratch izahay. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny famolavolana editorial ianao, mijanòna miaraka aminay ary mianara bebe kokoa momba ity lafiny mampiray ny endrika sary ity.
1 Torohevitra tokony hotadidina mandritra ny famolavolana
1.1 Mampiasà modely
1.1.1 Mba hanisa ny pejy
1.2 Mamorona fonony manintona
2 Fanasongadinana hafa
2.1 Fahalalana momba ny famolavolana sary
2.2 Programa izay hampiasaiko
2.4 ny mpamaky
2.5 Lafiny lafiny teknika
2.6 Ny zavatra ao anatiny
3 gazety aingam-panahy
Torohevitra tokony hotadidina mandritra ny famolavolana
Alohan'ny hanombohan'ny famolavolana sy hidina amin'ny asa, dia ilaina ny mandinika teboka maromaro miaraka amin'ny gazetintsika.
Raha mbola tsy manam-pahaizana amin'ny famolavolana tonian-dahatsoratra sy ny fandrafetana pejy ianao, dia manoro hevitra anao izahay hampiasa môdely. Ny maodely dia karazana mpitari-dalana izay hanampy anao hizara tsara ny fampahalalana rehetra sy ny singa rehetra tianao hampidirina ao amin'ny pejinao (soratra, sary, sns.)
Ny môdely miaraka amin'ireo pejy master dia manampy anao hanisa ny pejy araka ny tokony ho izy ary hahazoana antoka fa mitovy halavirana ny singa rehetra. Ny hany ataonao dia ny misintona ny môdely, sokafy amin'ny Adobe InDesign ary manomboka manitsy, mametraka sary ary mametaka amin'ny lahatsoratrao manokana. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ireo môdely tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny fanoloana endri-tsoratra na swatch miloko mba hamoronana endrika isan-karazany.
Mba hanisa ny pejy
Mba hamoronana môdely anao manokana dia zava-dehibe ny mandeha any amin'ny InDesign. Rehefa avy namorona ny antontan-taratasy miaraka amin'ny habeny sy ny sisiny mifanaraka amin'izany ianao, mandehana any amin'ny tontonana pejy (Window > Pejy) ary tsindrio ny kisary pejy master voalaza eo an-tampon'ny tontonana.
Mba hampidirana ny isa eo amin'ny pejy, mamorona sarin-tsoratra eo amin'ny pejy ary mandehana amin'ny safidy Soraty > Ampidiro ny endri-tsoratra manokana > Bookmarks > Laharan'ny pejy ankehitriny.
Mamorona lohapejy, izay matetika apetraka eo amin'ny tampony na ambany amin'ny pejy tsirairay, ary ataovy izany amin'ny fampiasana ny Type Tool (T). Ampidiro eo akaikin’ny fanitarana sy ny anaran’ny lahatsoratra na fizarana eo amin’ny pejy manaraka ny anaran’ilay gazety, dia vita ianao.
Mamorona fonony manintona
Raha efa nanoratra momba ny gazety ianao, dia ho hitanao, indrindra amin'ireo gazety malaza toa an'i Vogue, fa mampiasa loharanon-tsary manintona izy ireo.
Amin'izany fomba izany dia miantoka izy ireo fa tsy mankafy ny endrika fotsiny ny mpamaky fa mahatsiaro ny fonony, izany hoe mampiasa ny endrika tsy hay hadinoina amin'ny alàlan'ny sary, ny tonony ary ny endritsoratra manintona.
Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy:
Mampiasà sary na fanoharana mahaliana izay mety hiteraka fahalianana amin'ny mpijery. Mba hanaovana izany, ny torohevitsika dia ny mampiasa sary miaraka amin'ny fiaramanidina tena akaiky (akaiky na tena akaiky) Arakaraka ny maha-akaiky ny singa, ny lehibe kokoa ny sehatra hita maso amin'ny mpamaky ary noho izany dia manintona kokoa.
Mitazona ambaratongam-pahefana tsara amin'ny lahatsoratra, noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hanavahana ny lohateny, logo, dikanteny, sns. Mba misy dikany daholo ny vaovao vinavinaina rehefa mamaky azy ny mpamaky ary tsy ho very ny firindran'ny hafatra.
Mampiasà endritsoratra roa samihafa raha be indrindra izay mety mifandray amin'ny lafiny famolavolana ary azo atambatra tsara. Manoro hevitra izahay ny hampiasa ny iray ho an'ny lohateny lehibe ary ny iray ho an'ny lahatsoratra hafa.
Tsy maintsy mahasarika ihany koa ny atiny ary aza mifikitra loatra amin'izay tsy mahaliana. Mba hanaovana izany dia zava-dehibe ny hanaovanao sketsa na drafitra teo aloha alohan'ny hanoratana mandra-pahitanao ny farany.
Fahalalana momba ny famolavolana sary
Ity dia iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra izay ahitana ny fandrafetana sy fandrafetana ny fampahalalana izay hiseho amin'ny pejinao amin'ny alàlan'ny famolavolana tsara sy lojika. Iray amin'ireo dingana izay azo antoka fa maharitra ela vao tonga amin'ny marimaritra iraisana satria ilaina ny mamely ny tanjona.
Avy amin'ny vahoaka izay ho azontsika, ny endrika, ny karazana taratasy, sns. Tsy maintsy manolotra drafitra mirindra sy mirindra isika, fa ambonin’izay rehetra misarika ny saina sy manasa ny famakiana azy hatramin’ny farany.
Amin'izao fotoana izao dia miditra ny olana toy ny typography izay hampiasaina, habe, singa samihafa izay hamorona vaovao (lohahevitra, fampidirana, hevi-dehibe, sary, sary, fijery mipoaka, sns.), Ny loko lehibe izay hanjaka ary hanamarika ny fombany manokana, ny loko faharoa na hafa. , sns.
Programa izay hampiasaiko
Ilay mpamorona izay hanao ny famolavolana ny gazetinao, dia tsy maintsy manatanteraka ny rafitra fototra na ny layout izay hampidirana ny atiny any aoriana.
Manoro hevitra izahay hiasa araka ny voalaza etsy ambony, manomboka amin'ny môdely fototra misy ny fepetra famolavolana efa nekena teo aloha. Ho an'izany dia misy rindrambaiko fanovana samihafa toy ny QuarkXPress, Adobe InDesign, Freehand ary ireo hafa fanampiny izay afaka manampy antsika koa toy ny Illustrator, Photoshop na CorelDraw, ankoatra ny hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny gazety iray dia azo avoaka isan-kerinandro, isam-bolana, isaky ny roa volana na isam-bolana. Misy ihany koa ny manao andiany roa isan-taona ary iray mihitsy aza.
Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny karazana gazetiboky ataontsika sy ny pejiny (amidy ho an'ny besinimaro, amin'ny famandrihana, sns.) ary indrindra amin'ny fisian'ny votoaty. Ny gazetiboky mpiara-miasa, ohatra, dia tsy hanana fanazavana be dia be mba havoaka isam-bolana.
Etsy an-danin'izany, ny publication iray hafa manana lohahevitra mahaliana na fanjifana ary amidy amin'ny besinimaro, dia azo antoka fa ho afaka hamoaka azy io eny an-tsena matetika kokoa.
Alohan'ny hanapahana hevitra momba ny fitsipiky ny famolavolana ny gazety iray, dia tokony hovaliana ireo fanontaniana maromaro mba hamaritana tsara ny paramètre azy sy ny sehatra misy azy. Voalohany indrindra, tsy maintsy mamaritra ny mombamomba ny besinimaro tiantsika hokendrena, izany hoe iza no tiantsika ho mpamaky ny bokintsika.
Ny fananana ny tanjona voafaritra tsara, dia ho mora kokoa amintsika ny hanohy ny tetikasa sy hamaritra ny votoaty ho ampidirina, ny fomba ary indrindra indrindra, ny fepetra ara-esthétique na ny famolavolana. Ny fanitsiana gazety ho an’ny zatovo dia tsy mitovy amin’ny an’ny mpamaky eo anelanelan’ny 40 sy 60 taona.
Lafiny lafiny teknika
Ity ampahany ity dia famintinana fohy momba izay noresahina tetsy ambony, tao anatin'ity fizarana ity tsy maintsy mamakafaka sy manapa-kevitra amin'ny lafiny toy ny endrika na ny habeny izay hananany (A4, A5, endrika manokana, tabloid, sns.), ny taratasy ampiasaina (lanja, glossy na matte, varnished, sns.), loko (loko feno na mainty sy fotsy), ary ny fanontana. (teknolojia nomerika na offset).
Ao anatin'ity dingana ity dia zava-dehibe ny manomboka mazava tsara ny amin'izay orinasa mpanao pirinty no hiandraikitra ny fanontana ny gazety.
Ny zavatra ao anatiny
Ny mpamorona ihany koa no tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny vaovao havoaka amin'ny gazety. araka ny tonian-dahatsoratra. Ny mahazatra indrindra dia ny fandraisan’ny mpiasa rehetra ao amin’ity sampana ity ny filan-kevitry ny famoahan-dahatsoratra, tarihin’ny lehiben’ny tonian-dahatsoratra sy ny talen’ny famoahana, izay iarahan’izy ireo miady hevitra sy mamaritra ny lohahevitra mahaliana ny mpihaino alohan’ny hamelabelarana izany.
Ny famoahana rehetra, na inona na inona vanim-potoanany, dia tsy maintsy miasa miaraka amin'ny daty famaranana, izany hoe mametraka ny andro hahavitan'ny zava-drehetra (soratra, famolavolana, sns.) amin'ny kalandrie.
Amin'ny ankapobeny, rehefa manamarika ny daty, dia raisina an-tsaina ny fiovana sasany, ohatra, ny andro ilaina amin'ny fanontana, famaranana, fikarakarana, fandefasana, sns.
Ity misy lisitry ny gazetiboky hanentanana anao.
Niorina tany Frantsa tamin'ny 1945 izy io, ary manana fanontana 44 eran-tany sy tranonkala 37. Ny gazetiboky Elle Magazine dia manam-pahefana eo amin'ny tontolon'ny lamaody ary manome toerana manokana ho an'ny mpamorona, modely ary mpaka sary malaza iraisam-pirenena.
Io no gazety lamaody vehivavy lehibe indrindra eran-tany misy any amin'ny firenena 60 sy amin'ny fiteny 46. Any Espaina, namela marika teo amin'ny kolontsaina malaza izy nanomboka tamin'ny taona 1986. Nisongadina ny fonony sy ny atiny, ka nanome azy fahefana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ity gazety ity dia manana lohahevitra isan-karazany izay ahafahan'ny besinimaro mahita fampahalalana momba ny hatsaran-tarehy, ny fahasalamana, ny firavaka, ny fanandroana, ny fialamboly ary ny vaovao farany momba ny fiainan'ny olo-malaza.
Ity gazety ity dia manambatra ny lamaody amin'ny lohahevitra mitovy kokoa amin'ny zava-misy iainan'ny vehivavy. Ny fifantohany amin'ny fiainana ara-pananahana no iray amin'ireo teboka miavaka indrindra, satria mandrava ny sakana amin'ny fady.
Na dia mifandray amin'ny lamaody sy ny fifandraisana aza ny lohaheviny afovoany, ny pejiny dia mirakitra ny fironana farany indrindra amin'ny sehatry ny lamaody, ny fomba fanamboarana sakafo sy cocktail, fanehoan-kevitra momba ny taovolo sy ny fomban'ny olo-malaza ary ny hevitra fanomezana.
Ny Cosmopolitan dia mikendry ny vehivavy sahisahy ary ny fonony dia miavaka amin'ny gazetiboky hafa noho ny sariny feno fahasahiana sy mamoafady. Navoaka any amin'ny firenena 100 mahery izy io.
Io no gazety laharana voalohany any Espaina ary tarihin'i Olga Ruíz amin'izao fotoana izao. Mifanaraka amin’ny fiovan’ny fiaraha-monina ny Telva, mba hampibaribary ny votoatin’ny lamaody sy ny hatsaran-tarehy ankehitriny, mba hahafeno ny filan’ny vehivavy.
Mandrakotra ny lamaody sy ny hatsaran-tarehy iraisam-pirenena rehetra ny Telva ary efa mpitondra tenin'ny mpamorona, modely ary olo-malaza Espaniola.
Ireto no sasany amin'ireo torohevitra tsara indrindra azontsika aroso. Izao no fotoana hifandraisanao amin'ny endrikao manokana ary hifantoka amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » ny fomba hanaovana gazety